Calanka.com – 54 waddan oo Afrikaan ah oo ka dalbaday Trump raalli-gelin ku aadan hadalkii gefka ku ahaa Afrika
54 waddan oo Afrikaan ah oo ka dalbaday Trump raalli-gelin ku aadan hadalkii gefka ku ahaa Afrika
in Dibedda — By Admin —	January 13, 2018 -- 2131 Views
Hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jeediyay shir ka dhacay xafiiskiisa aqalka cad ee loo yaqaan “Oval Office” ayuu dalalka ay muhaajiriinta ka yidaamaan ku tilmaamay “qashin qub” oo kale ah, waxaana hadalkaasi ka dhashay carro balaaran oo adduunka oo dhan ah.
Trump ayaa qoraalk uu soo dhigay Twitter-ka waxa uu ku sheegay in ereybixinta uu isticmaalay ay ka duwan tahay tan ay warbaahinta faafisay, islamarkaana uusan ula jeedin caay ama bahdil.
Dalalka uu sida gaarka ah u carabaabay ayaa waxaa ka mid ah dalka Haiti, El Salvador iyo Afrika oo dhan.
Hadaba dalalka Afrika ayaa ka fal-celiyay “gefkan” uu madaxweynaha Mareykanka kula kacay Afrika, waxaana ay iminka dalbanayaan raalli gelin ku aadan hadalkaasi.
Bayaan ay ku saxiixan yihiin 54ta waddan ee ku midoobay daladda Midowga Afrika oo dhowaan soo baxay ayaa waxaa looga dalbanayaa in uu raalligelin ka bixiyo dibna ula laabto hadalkaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
“Aad iyo aad ayaan uga xunnahay, una cambaareyneynaa caydii cunsuriyadda ku dheehneyd ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kula kacay Afrika, warbaahintuna aad u hadal hayso”, ayaa lau yiri bayaanka.